Ajụjụ - Changzhou Plet Printing Technology CO, .LTD
N'IHI gịnị họrọ PLET
Vollọ ọrụ fotovoltaic squeegee
Ihuenyo mmetụ ụlọ ọrụ squeegee
Omenala ihuenyo ebi akwụkwọ squeegee
Atọ oyi akwa Sanwichi squeegee
Microelectronics ụlọ ọrụ squeegee
Akpaka squeegee grinder
Squeegee nrụgide nyocha
Squeegee mma onu polisher
Ahaziri scraper eletrik
Ahaziri ink laghachi scraper
scraper nchekwa ogbe
roba siri ike ule
Japan Bando ika
Bando B-ụdị squeegee
Bando P-ụdị squeegee
Andodị ụdị Bando S
Gịnị bụ isi ụdị nke SPS squeegee?
SPS squeegee na nkewa n'ime atọ isi ige: 1. Traditional M-ụdị squeegee (na-enweghị nkwado efere). 2, FGB faiba glaasi ịkpụcha. 3, AS unilateral carbon eriri ịkpụcha chịngọm.
E nwere ọtụtụ ụdị nke roba akụkụ nke SPS squeegee?
E nwere ugbu a abụọ ụdị, otu bụ M-ụdị roba eji na M-ụdị na FGB faiba glaasi ogwe, na ndị ọzọ bụ ndị gbakwunyere roba eji na AS-carbon eriri (conductive, ihe mgbaze na-eguzogide, na ndị ọzọ wear- eguzogide).
Gịnị bụ size nkọwa nke M ụdị ịkpụcha mama?
M ụdị nwere 9 * 50, 9 30, 7 * 40, 5 25, 5 20 n'ọnụ ọkpụrụkpụ dị ka ọkpụrụkpụ, na ike ga-ahaziri dị ka ahịa chọrọ.
Gịnị bụ akụkụ nke FGB faiba glaasi akpụcha?
The omenala ihuenyo-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ FGB faiba glaasi ịkpụcha nkọwa nke 9 * 50, ogologo nke ịcha dị ka ndị ahịa chọrọ. Nwere ike ahaziri dị ka ahịa chọrọ.
Gịnị bụ akụkụ nke AS carbon eriri squeegee?
The omenala ihuenyo-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ AS carbon eriri scraping nkọwa 7 * 50, ogologo dị ka ndị ahịa chọrọ. Nwere ike ahaziri dị ka ahịa chọrọ.
Gịnị bụ faịlụ na customization oge a chọrọ maka omenala ọrụ?
3D: STP, XT; CAD: 2000 version, omenala oge: n'ime 5-arụ ọrụ ụbọchị
The atọ ụdị akpụcha nwere ike ground. M nlereanya na FGB nlereanya otu kacha egweri ego 0.5mm (200 ntupu egweri wheel). AS carbon eriri ịkpụcha otu kacha egweri ego 0.1mm (200 ntupu egweri wheel, carbon eriri osisi nwekwara ike ịbụ n'ala). The squeegee ahụ ka e ji mee elu nwere otutu ihe mgbaze n'ime. The ekweghị ekwe nke mma onu bụ oke ala ka ground ozugbo. Ọ na-ewe naanị awa 24 tupu egweri.
Olee otú iji wụnye FGB faiba glaasi akpụcha na AS carbon eriri akpụcha n'ime ot fixtures?
Ma ndị FGB faiba glaasi akpụcha na AS carbon eriri akpụcha bụ 1.2mm oké. Ha nwere ike arụnyere na-8mm oké na mpe mpe akwa, nke anyị nwere ike inye.
Mmezi nke SPS Squeegee?
Okwu: center 21A ， QingyangRoad NO.1 ， Changzhou City, Jiangsu Province ， China